Safari ho an'ny Windows 10 - Azo alaina amin'ny fomba ofisialy? - Softwares
Miaraka amin'ny fifaninanana ara-pahasalamana eo amin'ny tsenan'ny mpitety tranonkala, Chrome, Safari, ary Firefox dia efa eo an-tampony efa ho folo taona izao. Betsaka ny mpampiasa no manana ny antony manokana hisafidianana ny navigateur na inona na inona ny rafitra fiasa. Apple dia manana fanbase goavambe, ary ny mpampiasa te-hanandrana sy hampiasa ny vokariny hahalalana hoe inona ny dikan'ilay hype.
Betsaka ny mpampiasa no mampiasa ny Safari ho mpitety tranonkala voalohany. Izany dia noho ny tsiambaratelo lehibe sy ny endri-javatra atolony. Safari ho an'ny varavarankely nijanona ela. Amin'ity bilaogy ity dia holazainay aminao ny antony.
Safari ho an'ny Windows 10 - Tantara
Safari dia tsy nanomboka tamin'ny kisendrasendra. Misy tantara lava ao ambadik'izany. Dave Hut no anarana lehibe niarahana tamin'i Mozilla Firefox sy ny mpiara-miasa aminy, ary raha vao fantatrao fa nanana hum i Apple dia mazava ho azy fa zavatra lehibe no hivoaka.
Noforonina tamin'ny tsiambaratelo feno ny navigateur safari; tsy nisy nahalala na inona na inona, tao ambadiky ny varavarana mihidy avokoa izany, ary rehefa nivoaka izy dia nisy fiatraikany lehibe. Raha tadidin'ireo mpiasa taloha dia tsy misy mpiasa mahazatra mahalala na inona na inona momba ny zava-mitranga ao ambadiky ny varavarana mihidy ireo; tsy nanana ny fantany momba ny fiatraikany lehibe hitranga izy ireo.
Ny Safari dia noforonina indrindra hanohanana ny fitaovana Apple rehetra, saingy namoaka ny navigateur ho an'ny windows koa izy ireo. Tamin'ny 2007, Safari dia azo idirana amin'ny varavarankely koa. Ny antony lehibe ao ambadiky ny famoahana ny Safari teo am-baravarankely dia ny fanomezana fifaninanana mivantana ho an'ny mpikaroka Internet, ny mpitety tranonkala ambony tamin'izany fotoana izany.
Ahoana ny fampidinana Safari ho an'ny Windows?
Ny fampidinana Safari ho an'ny windows dia tsy siansa balafomanga. Tena mora izany, ary tsy maintsy milaza aminao aho fa, rehefa misintona ianao, dia ho hitanao fa tena mora ampiasaina. Nanolotra rohy izahay handefasanao ny Safari.
Azonao atao ny manindry ny rohy , apetaho ary alefaso ny rindrambaiko hampidina azy.
Safari ho an'ny Windows - Fisehoana voalohany
Fantatsika fa manana mpankafy be dia be i Apple, ary na dia mahazo fambara kely momba ny zavatra ho avy aza izy ireo, dia mihombo. Na izany aza, tsy izany no nitranga tamin'ny Safari. Niasa manokana izany talohan'ny nanolorana azy ireo ho an'ny mpanatrika. Tamin'ny 2007, nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny famoahana ny Safari ho an'ny Windows XP sy Windows Vista i Steve Jobs. Hetsika lehibe natao hidirana amin'ny tsena vaovao, izay misy ny fifaninanana mahasalama.
Tena mahafinaritra ny mahafantatra fa nanaiky an'i Safari tamim-pifaliana ireo mpanatrika. Vonona ny hahafantatra momba ny hafetsena ho an'i Apple izy ireo ary te hampiasa ny browser. Ny daty namoahana azy dia ny 11 Jona 2007. Saingy, tamin'ny Mey 2012, najanon'izy ireo ny fanohanana Safari ho an'ny windows. Ny fanontaniana lehibe eto dia ny hoe, mbola azo atao ve ny mampiasa Safari amin'ny windows? Hahafantatra ianao aorian'ny famakiana ity lahatsoratra iray manontolo ity.
Safari Browser - Tombony sy fatiantoka
Na inona na inona dinihina na zahana, ny mpampiasa dia te hahalala foana ny tombony sy ny fatiantoka. Tsy mahagaga raha na Safari aza dia nahazo tombony sy fatiantoka manokana. Ny tombony lehibe indrindra amin'ny Safari ho an'ny Windows dia ny fizarana faha-5. Nahazo fiasa iray nahafahana namaky vaovao izy ireo. Nahazo alalana ihany koa izy ireo hamela ny fanitarana natao manokana, hahatonga azy io ho mpitety tranonkala mifaninana akaiky amin'ny Firefox.
Avelan'izy ireo ihany koa ny fanampiana fanampiny hanakanana ny doka ho anao. Na izany aza, ny safari manasongadina indrindra dia ny fikandrana mampiasa plugins sy extensions. Tsy dia misy resaka firy momba ny fatiantoka; ny fatiantoka lehibe indrindra dia ny fampitsaharan'ny Apple ny navigateur Safari ho an'ny windows. Miasa tanteraka ny navigateur hafa toa ny chrome sy Firefox, ary azonao ampiasaina amin'ny fomba miavaka amin'ny fanavaozana tsy tapaka.
Faran'ny sidina safaris miaraka amin'ny Windows!
Tena sarotra ny mahafantatra ny antony tsy maintsy nisarahan'ny Safari tamin'ny varavarankely; misy tsaho maro, vinavina maro izay misy. Misy ny milaza fa noho ny paoma tsy afaka nifaninana teny an-tsena tamin'ireo mpanamory efa misy, ny sasany kosa milaza fa hisarika ny mpampiasa ho macOS, izay tsy nahomby. Na eo aza ny fahafantarana fa tsy nahomby tamin'ny tsenan'ny windows i Apple, dia fantatra fa browser mahafinaritra i Safari izay mifantoka amin'ny hafainganana sy ny fiainana manokana.
Ireo mpizahatany namboarina tao Apple, Safari dia iray amin'ireo mpitety tranonkala malaza sy malaza. Izy io dia natao ho mpizahatany mahazatra ho an'ny fitaovana paoma hatramin'ny nivoahany tamin'ny 2003. Apple dia manana rakitsoratra madio tokoa momba ny fiainana manokana, ary ny Safari dia mety tsy ho mpizaha tena be mpampiasa toa ny maro, fa manome anao ny mety fiainana manokana ilainao.
Safari dia manana endri-javatra maro, fa ny con lehibe indrindra dia ny fitaovana Apple ihany no misy azy. Nomena naoty tsara indrindra ho an'ny mpampiasa izany. Safari koa dia manana fiarovana sy tsiambaratelo lehibe, izay mahatonga azy io ho fitetezana azo antoka.
1Q. Afaka misintona Safari amin'ny windows ve aho?
taona:Eny, fa ny kinova faha-5 an'ny Safari ihany no azonao sintonina fa tsy ny kinova farany.
2Q. Maimaimpoana ve ny Safari ho an'ny windows?
taona:Eny, ny kinova misy an'ny windows dia ny kinova 5, izay maimaimpoana ho an'ny mpampiasa.
3Q. Safari ve ho an'ny Windows azo antoka?
taona:Ny zava-dehibe nifantohan'i Safaris dia ny hanomezana hafainganam-pandeha farany sy fiainana manokana ho an'ireo mpampiasa; tsy toy ny chrome, izay misy endri-javatra be loatra, Safari dia manome hafainganana sy tsiambaratelo tsy miovaova.
Safari for Windows dia safidy tsara raha mila mpitety tranonkala miaraka amina mpampiasa interface tsotra ianao izay manome anao fiainana manokana sy hafainganana. Ireo mpampiasa mifindra amin'ny macOS mankany amin'ny windows dia mety manohy mampiasa Safari ho toy ny tranokala tsara. Raha te hahafantatra bebe kokoa momba ny Safari for windows, dia anontanio anay ao amin'ny boaty chat eto ambany ny fanontanianao. Misokatra ihany koa izahay amin'ny hevitrao sy ny soso-kevitrao.
mijery fandaharana amin'ny fahitalavitra maimaim-poana hd
toerana tsara indrindra hijerena fahitalavitra maimaim-poana
ny fomba fampiasana tv pluto
ny fomba famoronana audio roblox
misintona grand steal auto vice city
fampiharana tubi tv ho an'ny android
stream maimaim-poana amin'ny Internet